Galaxy Tab A 8.0 2019: Qeexitaanno, Qiime iyo Siidayn | Androidsis
Sannadkan 2019 waa mid deggan marka la eego Kiniiniga Android ayaa bilaabaya. Laakiin Samsung hadda waxay noo reebaysaa kiniin cusub, ka labaad sanadkan. Sumadda Kuuriya ayaa leh Galaxy Tab A 8.0 2019 horeyba si rasmi ah ayaa loo soo bandhigay. Waxay ku saabsan tahay dib-u-cusbooneysiinta noocyada ugu jaban ee astaanta, taas oo hadda naga dhigeysa cusbooneysiinta taageerada S Pen. Waa mid ka mid ah isbeddelada waaweyn ee shirkaddu nooga tagayso qaabkan gaarka ah.
In 2015 qaabkii ugu horreeyay ee noocan ah ayaa ku dhacay suuqa, in shirkaddu ay cusbooneysiinaysay sanad walba. Hadda waa xilligii Galaxy Tab A 8.0 2019. Waxaa si gaar ah loogu talagalay isticmaalka multimedia, marka lagu daro shaqooyinka kala duwan, iyada oo ay ugu wacan tahay taageerada loo sheegay S Pen.
Runtu waxay tahay in shirkadda Kuuriya kuma soo bandhigin waxyaabo badan oo kadis ah qaabkan. Tan iyo markii ay sharad on version xoogaa la cusbooneysiiyey la ixtiraamo in model asalka ah. Laakiin guud ahaan, Galaxy Tab A 8.0 2019 waxaa loo soo bandhigay ikhtiyaar wanaagsan qeybtiisa. Qeexitaanno wanaagsan, gaar ahaan howlaha sida cunista waxyaabaha. Kuwani waa qeexitaankiisa:
Screen: 8-inch TFT oo leh xallinta 1.920 x 1.200 iyo taageerada S Pen
Gacaliye: Exynos 7904 oo ku yaal 1,8GHz
Kaydinta Gudaha: 32 GB (oo lagu ballaarin karo MicroSD illaa 512GB)
Nidaamka hawlgalka: Android + One UI
Cámara trasera: 8 Xildhibaan
Batariga: 4.200 mAh
Xuduudaha kala duwan: 4G, WiFi 5, WiFi Direct, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, 3,5mm Jack
Cabbirada: 201.5 x 122.4 x 8.9 mm
Peso: 325 garaam
Waxaan markaa arki karnaa, in iyadoo aan wax lala yaabo ahayn, waa kiniin shaqadiisa si fiican u qabta. Intaa waxaa sii dheer, waxay u badan tahay inay jiraan isticmaaleyaal kuwaas oo taageerada S Pen ay isku mid tahay wax go'aan ka gaaraya habka iibsiga. Waxa kale oo macnaheedu yahay in la arko in kaalmadani ay ku sii fideyso noocyada kiniiniyada sumadda.
Hadda, Ma hayno faahfaahin ku saabsan daahfurka Galaxy Tab A 8.0 2019. Samsung waxay xaqiijisay inay bilawday qaasatan Aasiya, marka lagu daro Boqortooyada Ingiriiska. Sababtaas awgeed, waa in la filayaa in sidoo kale muddo gaaban laga bilaabo Spain. In kasta oo xilligan aynaan waxba ka ogayn, taariikhaha ama qiimaha uu leeyahay Galaxy Tab A 8.0 2019. Waxaan rajeyneynaa inaan xog ka helno arrintan goor dhow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Galaxy Tab A 8.0 2019: Kiniin cusub oo Samsung ah